Imininingwane emisha esivumelwaneni sokuhweba samahhala se-EU-US | Ezezimali Zomnotho
Umbiko omusha ngomthelela weSivumelwano Sokuhweba Mahhala se-EU-US (TTIP)
U-Alejandro Vinal | | Umsebenzi
Isivumelwano Sokuhweba Okukhululekile se-European Union-United States, esihlose ukuhlanganisa yomibili iminotho, sikhona ukuxoxisana ngasese, iqiniso elibangele ukwesaba nentukuthelo phakathi kwezakhamizi eziningi, e-United States naseYurophu. Kuyesatshwa ukwehluka ukuthi umthetho umphakathi ungazama ngenhloso yokwenza lula ukushintshana phakathi kwamabhulokhi womabili. Kuyesatshwa nokuthi ngenxa yalokho, izokwanda izinga lokungasebenziNgokuphambene nalokho, abameli be-TTIP babikezela ukwenziwa ngcono kwekhwalithi yempilo yezakhamizi zaseYurophu.
Kuze kube manje, imininingwane ibiningi, yenzelwa futhi iphikisana, futhi isakazekile. Kepha muva nje, UJeromin Capaldo, umcwaningi ovela ku- Tufts inyuvesi usikhanyisele ngale ndaba.
Ngokuqondile, umsebenzi wakhe Inesihloko esithi: »Isivumelwano Sokuhweba Nokutshalwa Kwezimali E-Transatlantic: Ukuhlakazeka kwe-European Union, Ukungasebenzi kanye Nokungazinzi»
UJeromin ukhuluma ngokuthi izifundo i-European Union evikela kuzo isikhundla sayo yizifundo ezisuselwa ku imodeli yezomnotho enganele. Ngokungafani nemodeli esetshenziselwe lolu cwaningo; Inqubomgomo Yomhlaba Wonke Yezizwe Ezihlangene.
Umsebenzi ubikezela a ikusasa elimpunga yabenzi bezinqubomgomo e-European Union, abazobhekana nokulahlekelwa cishe Imisebenzi eyi-600.000 kanye nokulahlekelwa okuphawulekayo ku- umholo wabasebenzi (Endabeni yeFrance, abathintekayo kakhulu, cishe ama- € 5.500 ngomsebenzi ngamunye).
Sula amaphuzu embikweni
I-TTIP ingaholela ku ukulahlekelwa kwensalela ngokukhishwa kwenetha eliphelele kuze kube yiminyaka eyishumi ngemuva kokuvunyelwa, uma kuqhathaniswa nesimo "se-NO TTIP". Iminotho yaseNyakatho Yurophu izolahlekelwa kakhulu (2,7% ye-GDP), ilandelwe yiFrance (1,9%), iJalimane (1,4%) ne-United Kingdom (0,95%).
I-TTIP ingaholela ku ukulahlekelwa kwensalela ngokwe-GDP. Njengezibalo zokuthekelisa okuphelele, amazwe aseNyakatho Yurophu azokwehliswa kakhulu kwi-GDP (-0,50%) kulandele iFrance (-0,48%) neJalimane (-0,29%).
I-TTIP ingaholela ku ukulahlekelwa emholweni wabasebenzi. IFrance izothinteka kakhulu, ngokulahlekelwa ngu- € 5.500 ngomsebenzi ngamunye, kulandele amazwe aseNyakatho Yurophu (€ -4.800 ngomsebenzi ngamunye), i-United Kingdom (€ -4.200 ngomsebenzi ngamunye) neJalimane (- € 3.400 ngomsebenzi ngamunye).
I-TTIP ingaholela ekulahlekelweni yimisebenzi. Silinganisela ukuthi cishe yimisebenzi engama-600.000 ezolahleka. Amazwe aseNyakatho Yurophu yiwona azothinteka kakhulu (-223.000 imisebenzi), alandelwe yiJalimane (-134.000 imisebenzi), iFrance (-130.000 imisebenzi) kanye namazwe aseNingizimu yeYurophu (-90.000 imisebenzi).
I-TTIP ingaholela ku ukuncishiswa kwesabelo somholo ku-GDP, ukuqinisa umkhuba onikela ekumeni kwamanje. Uzakwabo ukwanda komnikelo wenzuzo nemali engenayo kumholo ophelele, okukhombisa ukuthi kuzoba nokudluliswa kwemali engenayo isuka kwezabasebenzi iye enhlokodolobha. Ukudluliswa okubaluleke kakhulu kuzokwenzeka e-United Kingdom (7%), eFrance (8%), eJalimane naseNyakatho Yurophu (4%).
I-TTIP ingaholela ku ukulahleka kwemali engenayo yomphakathi yezwe. Ukweqiwa kwentela engaqondile (njengeNtengo yeValue Added) koxhaso kuzokwehla kuwo wonke amazwe e-EU, neFrance ilahlekelwe kakhulu (i-0.64% ye-GDP). Ukushoda komphakathi kungakhuphula isabelo sabo se-GDP yezwe ngalinye le-EU, kusunduzele izimali zomphakathi eduze, noma ngaphezulu, kwemikhawulo ebekwe yiSivumelwano seMaastricht.
I-TTIP ingaholela ku ukwanda kokungazinzi kwezezimali nokuqongelela ukungalingani. Ngokuncipha kwemali etholwayo ngokuthumela izinto kwamanye amazwe, ukwehla kweholo kanye nokwehla kwemali engenayo, isidingo kuzodingeka ukuthi sigcinwe yinzuzo nokutshalwa kwemali. Kepha ngokukhula kokubuthakathaka kokusetshenziswa, izinzuzo akunakulindeleka ukuthi zivele ekuthengisweni okwandisiwe. Ukucabanga okungokoqobo ukuthi inzuzo nokutshalwa kwezimali (ikakhulukazi kuzimpahla zezimali) kuzoqiniswa ngamanani entengo akhuphukayo. Ithuba lokungazinzi komnotho omkhulu kwalesi siphakamiso laziwa kahle yibo bonke.
Isithombe - Flickr
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Umbiko omusha ngomthelela weSivumelwano Sokuhweba Mahhala se-EU-US (TTIP)
IVietnam, umnotho omusha osafufusa